कांग्रेस महाधिवेशन : झापामा सिटौला कि विश्वप्रकाश हाबी ?
Home नेपालबहस ब्रेकिङ न्युज कांग्रेस महाधिवेशन : झापामा सिटौला कि विश्वप्रकाश हाबी ?
बुधबार, मंसिर ८, २०७८ ५:२०
८ मंसिर, झापा । झापामा नेपाली कांग्रेसका दुई ‘हेब्बी वेट’ नेता छन् । कृष्ण प्रसाद सिटौला र विश्वप्रकाश शर्मा । यी नेता तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिस्पर्धामा छन् । सिटौला कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री हुन् । उनी अहिले पार्टीभित्र ‘तेस्रो धार’ भन्दै गुट चलाउँदै आएका छन् ।
झापा( १ ‘ख’ को क्षेत्रीय सभापतिमा शर्मा समूहका सन्तोष न्यौपाने विजयी भएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ ‘क’ मा लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’मा किरण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । उनीहरू दुवै सिटौला समूहका हुन् । क्षेत्र नम्बर ३ ‘क’ चिन्तामणि खरेल र क्षेत्र नम्बर ३ ‘ख’ मा तुलसीप्रसाद ओली विजयी भएका हुन् । उनीहरू दुवै सिटौला समूहका हुन् । यस्तै, क्षेत्र नम्बर ४ ‘ख’ मा सिटौला समूहका ख्यामराज सिटौला विजयी भएका छन् । क्षेत्र नम्बर(५ ‘क’ मा जीवनकुमार र क्षेत्र नम्बर ५ ‘ख’ मा रवि केसी न्यौपाने विजयी भएका छन् । उनीहरू दुवै विश्वप्रकाश शर्मा समूहका हुन् ।
यस्तै, संघीय निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत झापामा रहेका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सिटौला समूहले तीन र विश्वप्रकाश समूहले दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा सभापतिको जित हात पारेको छ । क्षेत्र नम्बर १ को सभापतिमा शर्मा समूहका इन्द्रबहादुर बुढाथोकी, क्षेत्र नम्बर २ मा सिटौला समूहका खगेन्द्र मैनाली, क्षेत्र नम्बर ३ मा सिटौला समूहकै गणेश पोखरेल, क्षेत्र नम्बर ४ मा सिटौला समूहका जयनारायण साह र क्षेत्र नम्बर ५ मा विश्वप्रकाश समूहका ढुण्डीराज भण्डारी निर्वाचित भएका हुन् ।
यस्तै, महाधिवेशनप्रतिनिधितर्फ पनि शर्मा समूहभन्दा सिटौला समूह नै अघि छ । झापामा तुलनात्मक रूपमा सिटौला समूह बलियो देखिन्छ ।
देशभर चिसो बढ्यो स् तराईमा तुवाँलो, आज यी क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना
एमाले महाधिवेशनः दलाल पुँजीवादमा उभिएर समाजवादको हुँकार